Wariye BBC oo lagu xirey Muqdisho 21 Nov 21, 2012 - 5:44:27 AM
Wariyihii BBC Qaybta Somaliga uga soo warmi jiray Muqdisho oo xabsiga la dhigay Maanta, iyadoo la sheegay in loo haysto warar uu kasii daayay BBC oo ku saabsan shaciga dalka gaar ahaan Hab-dhaqanka Maxkamadaha.
Xariga Wariyaha ayaa waxaa amar ku bixiyay Gudoomiyaha Maxkamada Ciidamada Liibaan Yaroow iyadoo ciidamo Milateri ah ay ku xireen Xabsiga weyn ee Muqdisho, waxaana arintan ay ka yaabisay Wariyeyaasha kale ee Muqdisho ku sugan.
"Ibraahim Maxamed Aadan waxaa xiray Milateriga Somalia waxaana lagu xiray Amar kasoo baxay Gudoomiyaha Maxkamada Ciidamada DF" ayuu yiri Wariye ay xiligii la xirayay Ibraahim wada socdeen, isagoo sheegay inay shalay kulmeen Wariyaha iyo Gudoomiyaha Maxakmada Ciidamada.
Gudoomiyaha Maxkamada sare oo wax laga weydiiyay xariga wariyaha ayaa inuu ka hadlo ka gaabsaday, balse wuxuu sheegay in amar uu isagu bixiyay lagu xiray wariyaha, dhawaana Maxkamad la horkeeni doono.
Warar hoose oo GO ay heshay ayaa sheegaya in Ibaahim la xiray todobaadkii hore balse dib loo daayay, iyadoo dhawaanahan ay wadahadalo ku saabsan warar uu sii daayay ay u socdeen isaga iyo Maxkamada Ciidamada, iyadoo maanta si toos ah ay ciidamadu u xireen.
Magaalada Muqdisho ayaa ah goobta ugu khatarta badan Somalia ee ay wariyeyaal ka howlgalaan, iyadoo la ogyahay in 18-wariye oo Somalia lagu dilay sanadkan oo keliya intooda badan lagu dilay Muqdisho.